Buugga Wakiilada - SEIU6
Doorkaaga Wakiil ahaan: Waxyaabaha Assaasiga ah
Hel waxyaabaha aassaasiga ah ee ku saabsan waxa aad u baahan tahay wakiil ahaan, waxa ilaalintaada iyo waajibaadkaagu yihiin, iyo sida loogu soo dhaweeyo shaqaalaha cusub shaqada.
La Hadlidda Shaqaalaha aad Wada Shaqaysaan
Sida loo sharaxo SEIU iyo sida aynu u shaqayno midow ahaan, sharaxaada nidaamkena khidmada xubinnimada, iyo faa’iidada uu soo kordhinayo midowga.
Dhibaato Xalinta 101
Waxa aad samayso marka aad la kulanto dhibaato. Qaybtan waxay na bartaa sida loo ogaado dhibaatooyinka, waxa aad xaqa u leedahay inaad ogaato wakiil ahaan, sida loo falanqeeyo dhibaatada, iyo la shaqaynta maamulka si dhibaatooyinka loogu xaliyo si degdeg ah.
Doorkaaga Wakiil Ahaan: Qodo-dheer
Marka, waxaad ku yeelatay khilaaf ka taagan goobtaada shaqada oo aan si sahal ah ku dhamaanaynin. Wakiiladu waxay leeyihiin doorar badan oo kala duwan, waxayna haystaan qalab badan oo ay u adeegsadaan si ay u xaliyaan arimaha aan gaarsiisnayn xeraynta cabashooyinka rasmiga ah.
Muranka iyo Cabashooyinka: Xuquuqaha, Habraacyada, iyo Dhaqamada ugu Wanaagsan
Dhacdooyinka marka shirarka u dhexeeya maamulka iyo xubinta ay horseedi karaan edbin ama cabasho, akhri xuquuqaha xubnaha (iyo xuquqahaada) isku xigxiga, iyo sida si rasmi ah ee loo dhigo cabashooyinka si loo gaaro xallinta saxda ah ee shaqaalaha.
Akhriso erey bixinta SEIU iyo macluumaadka taageera si aad wax badan u ogaato.
Buugga Wakiilada: Buug yar
Buug-yare muhiima ah oo loogu talagalay Wakiilada SEIU.